Latest Myanmar News - Page 162 of 324 - News & Media
လေဖြတ်လူနာထိ ကောင်းစွာလှုပ်ရှား လာနိုင်စေသည့် ကျီးအာဥ
November 24, 2020 by Latest Myanmar News
လေဖြတ်ခြင်း နှင့် ခါးနာ ဒူးနာ ၊အဆစ်အမြစ်ကိုက် ခဲသူများအတွက် ဆေးနည်း ကျီးအာသီးပင်ရဲ့ ဥကိုတူးယူပါ ။ရေစင်စင်ဆေးကြောပြီး ခပ်ပါးပါးလေး လှီးထားပါ ။ လှီးထားသော ကျီးအာသီးဥ ( ၅ ) ကျပ်သားကိုနှမ်းဆီစစ်စစ် ( ၅ ) ကျပ်သားဖြင့် ဒယ်အိုးတွင်ထည့်ကြော်ပါ ။ ကျီးအာသီးဥများကို ကျွတ်ရွသည်ထိ ကြော်ပြီးအကြော်ဖတ်များကို ဖယ်ထားလိုက်ပါ ။ ကြော်ထားသော ဆီများကိုယူ၍ ပုလင်း (သို့မဟုတ် ) ဗူးထဲထည့်ပါ ။ ထိုဆေးရည်ကို လေဖြတ်ထားသောသူ၏ ခြေလက်တို့ကို လူးပေး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ အသားအရည်များကို နွေးထွေးစွာရှိလာပြီး နှစ်ပါတ်ခန့်လူးပေးပါက ကောင်းစွာလှုပ်ရှာလာသည်ကိုတွေ့ရပါမည် ။ ။ (ပိုသုံးချင်လျင်လည်း အတိုင်းအဆအချိုးအစားတိုင်း လုပ်ပါခင်ဗျာ) မှတ်ချက် ခါးနာခြင်း ဒူးနာခြင်း … Read more
ကားလိုခငျြရငျဖွဈဖွဈ၊ ကားအရောငျးအဝယျလုပျရငျဖွဈဖွဈ ဒီယတွာ လုပျပါ
ကား နှငျ့ပကျသကျမြှ ဒီယတွာ လုပျပါလေ. (၁)ကားလိုခငျြရငျ၊ ကားအန်ဒရာယျကငျးခငျြရငျ ဘုနျးကွီးကို ဖိနပျလှူရတယျ လိုခငျြတဲ့ကား အမြိုးအစားကို နမျးပေးရတယျ နမျးရငျးနဲ့ ကိုယျ့ဆီကိုမကွာခငျ လာခဲ့ဖို့ပွောပါ အန်ဒရာယျကငျးခငျြတဲ့ လူကလညျး အန်ဒရာယျကငျးဖို့ပွောပါ….။ (၂)ကားလိုခငျြရငျ၊ ကားဝယျလိုလြှငျ ဘုနျးကွီး၊ဆရာသမား ကိုကနျတော့တဲ့ အခါမှာ လကျဆောငျပေးတဲ့ အခါမှာ ကှမျးရှကျ ကှမျးယာ ထညျ့ပွီး ကနျတော့ရငျ စီးစရာ ယဉျရထား ကားရတတျပါတယျ……။ (၃)ကားရောငျးထှကျစရေနျ နံ့သာဖွူတုံး .၁.တုံးနဲ့ ရောငျးခငျြသောကားစကျဖုံးကို .၇.ရကျ ဆကျတိုကျခေါကျပါ ထှကျ၏။ (၄)ကားဒုက်ခမရောကျစရေနျ တနလာင်္နေ့ နံနကျ ၉နာရီ ၄၅မီးနဈ ရောကျတိုငျး သွဇာညှနျ့ ၁၄ ညှနျ့ကို ကားမှာထိုးပါ။ကားနဲ့ပကျသကျသော စာရှကျစာတမျးမြားကို မိတ်တူဆှဲ၍ အမှေးတိုငျ အိုးအောကျတှငျဖိထားပါ။ အမှေးတိုငျထှနျး၍ ကားအန်ဒရာယျကငျးရနျ ဆုတောငျးပါ။ … Read more
Categories ဗေဒင် Tags ကားလိုခငျြ
ပြောင်းဖူးနှင့် နှ လုံးရောဂါ ပြောင်းဖူး စားသုံးခြင်းသည် နှလုံး ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ကနေဒါဆေးသိပ္ပံပညာရှင်များ၏ သုတေသန ပြုချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပြောင်းဖူးသည် ပူနွေး စိုစွတ်သော ရာသီဥတုတွင် ဖြစ်ထွန်းသော အသီးအနှံ တမျိုး ဖြစ်သည်။ ပြောင်းဖူးသည် ချိုသော အရာသာရှိသည့် အပြင် အနည်းငယ် ဖန်သော အရသာလည်း ရှိသည်။ ပြောင်းဖူးတွင် ဗီတာမင် ဘီ1၊ ဗီတာမင် ဘီ5၊ ဗီတာမင် စီ၊ ဖော့စရပ်စ်၊ မဂ္ဂနီစ်နှင့် အမျှင်ဓာတ်များ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် အသားဓာတ်များလည်း ပါဝင်သည်။ ပြောင်းဖူး ပုံမှန် စားသုံးပေးပါက နှလုံး သွေးကြောများကို သန်မာစေသည်။ နှလုံးသွေးကြော စီးဆင်းမှုကို အထောက်အကူ ပြုစေသည်။ ထို့အပြင် … Read more
၄ခါအသုံးပွုရုံနဲ့ ဆံပငျကြှတျရပျ၊ ဆံပငျမဲနကျသနျစှမျးစပွေီး မကျြခုံးမှေးလေးတှပေါ ပေါကျလာစသေောနညျး .
2 ပါတျအတှငျး ၉၅% ဆံပငျကြှတျသကျသာ၊ ဆံပငျမဲနကျ သနျစှမျးစပွေီး မကျြခုံးမှေးလေးတှပေါ ပေါကျလာစတေဲ့ သဘာဝနညျးလေး ဒီနညျးလေးက ယုမှနျကိုယျတိုငျစမျးသပျထားပွီး တကယျထူးခွားလို့ တငျပေးဖွဈတာပါ။ ၄ခေါကျလောကျ အသုံးပွုရုံနဲ့ ဆံပငျ ၉၅%အကြှတျသကျသာ မဲနကျသနျစှမျးစပေါတယျ။ ယုမှနျအရငျက ဆံပငျတှေ ကြှတျတာ ထိပျပါပွောငျတဲ့ အထိပါ။ ဆေးနညျးပေါငျးစုံ ကုခဲ့ပမေဲ့ အဆငျမပွခေဲ့ပါဘူး။ ထိပျပါပွောငျပွီး ဆံပငျတအားကြှတျလို့ အစခံရတဲ့အထိပါ။ ခုဒီနညျးလေးကို စမျးသပျတာ ၄ခါမွောကျမှာတငျ ခေါငျးလြှျောရငျ ဆံပငျ ၁၀၀ ကြျောကြှတျတဲ့သူက ၅ပငျလောကျပဲ ကြှတျတော့ပါတယျ။ အစက တျောတျောကို အံ့ဩခဲ့တာပါ။ အဲ့လိုရလဒျရလာလိမျ့မယျလို့တောငျ ထငျမထားပါဘူး။ ပွီးတော့ မကျြခုံးကိုပါ လိမျးတာ၊ မကျြခုံးမှေးတှပေါ ပေါကျလာပွီး ထူထဲလာပါတယျ။ ရရှေညျစှဲလုပျရငျ ဆံပငျပေါကျလာနိုငျပါတယျ။ ယုမှနျကတော့ ဆံပငျအသဈလေးတှေ ပွနျပေါကျလာပါပွီ။ နညျးလေးကတော့ … Read more
Categories အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး Tags ဆံပငျမဲနကျ
တနင်္လာသားသမီးများ ( ၁ ) ဥာဏ်အလွန်ကောင်းပါတယ်။စကားအပြောအဆိုငြင်သာပြီးဥာဏ်ရည်မြင့်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၂ ) အရမ်း ကို ခံစား လွယ်ပြီး ထိခိုက်လွယ်တဲ့သူတွေပါ။ သေးသေးလေးတွေက အစ အရမ်း ခံစားပြီးဝမ်းနည်း လွယ်တဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၃ ) မိသားစု၊ ဆွေမျိုး၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ အချိန်ဖြုန်းရတာ၊ တွေ့ဆုံရတာမျိုးကို အရမ်းနှစ်သက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစု၊သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ်သံယောဇဉ် ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၄ ) ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလိုလားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကို သယ်ဆောင်လာပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၅ ) သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်တာ၊ စကားများတာမျိုးဆိုရင်လည်း အရင်စခေါ်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့တွေပါ ။ ( ၆ ) အရည်အချင်း … Read more
ငါးသိုငျးခြောငျးမွို့ရှိ အပေါငျဆိုငျတဈဆိုငျက ကိုဗဈကာလမှာ ထောကျပံ့တဲ့အနနေဲ့ အပေါငျခံထားသညျ့ စကျဘီးနှငျ့ ဆိုကျကားမြား အခမဲ့ပွနျပေး..
ငါးသိုငျးခြောငျးမွို့ရှိ အပေါငျဆိုငျတဈဆိုငျက အပေါငျခံထားသညျ့ စကျဘီးနှငျ့ ဆိုကျကားမြား အခမဲ့ပွနျပေး ဇျောသဈဦး/ဧရာဝတီတိုငျးမျ(ငါးသိုငျးခြောငျး)နိုဝငျဘာလ ၂၄ ရကျ။ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ပုသိမျခရိုငျ၊ ငါးသိုငျးခြောငျးမွို့ ရှိ အပေါငျဆိုငျတဆိုငျက ၎င်းငျးတို့ဆိုငျ၌ လာရောကျပေါငျနှံထားသညျ့ စကျဘီးနှငျ့ဆိုကျကားမြားကို အပေါငျလကျမှတျပွပါက အခမဲ့ပွနျပေးမညျ ဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးဆိုငျပိုငျရှငျ၏ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ ၎င်းငျးဆိုငျမှာ ငါးသိုငျးခြောငျးမွို့ အောငျဆနျးရပျကှကျဘုရငျ့နောငျလမျးတှငျ ဖှငျ့လှဈထားသော အပေါငျဆိုငျဖွဈပွီး ကိုဗဈကာလ အခွခေံလူတနျးစားမြားကို ထောကျပံ့သညျ့အနဖွေငျ့ ဆိုငျတှငျ လာရောကျပေါငျနှံထားသညျ့ စကျဘီးနှငျ့ ဆိုကျကားမြားကို အခမဲ့ပွနျပေးခွငျး ဖွဈကွောငျး ဆိုငျပိုငျရှငျထံမှ သိရသညျ။ “ကိုဗဈကာလမှာ ထောကျပံ့တဲ့အနနေဲ့ ဆိုငျမှာပေါငျထားတဲ့ စကျဘီးနှငျ့ဆိုကျကားကို အပေါငျလကျမှတျပွပါက အခမဲ့ ပွနျပေးပါတာ”ဟု ဆိုငျရှငျဖွဈသူ မခငျမာကွူက ဧရာဝတီတိုငျးမျကို ပွောသညျ။ ၎င်းငျး၏ဆိုငျတှငျ လာရောကျပေါငျနှံထားသညျ့ စကျဘီးအစီးရေ ၅၀ ကြျောနှငျ့ … Read more
Categories သတင်းများ Tags ငါးသိုငျးခြောငျ
ဝါနတေဲ့သှားတှကေို ပွနျပွီးဖွူဝငျးစမေယျ့ အိမျတှငျးနညျးလမျးတှေ
လူတိုငျး ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ အပွုံးကို ပိုငျဆိုငျခငျြကွပါမယျ။ သှားလေးတှေ ဖွူဝငျးနမေယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ အပွုံးဟာ ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့ရှိပွီး လှပနမှောပါ။ နို့မှုနျ့နဲ့ သှားတိုကျဆေး နို့မှုနျ့က သငျ့ရဲ့ သှားကို ဖွူဝငျးစဖေို့ ကူညီပေးပါ။ နို့မှုနျ့နဲ့ သှားတိုကျဆေးရောပွီး သှားကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး သခြောတိုကျပေးမယျဆိုရငျ သှာေးတှ ဖွူဝငျးစဖေို့ အကူအညီဖွဈစမှောပါ။ တဈပတျကို ၁ ကွိမျ (သို့) ၂ ကွိမျလုပျပါ။ မှုနျ့ဖုတျဆိုဒါနဲ့ သံပုယိုရညျ (သို့) သံပုရာရညျ မှုနျ့ဖုတျဆိုဒါနညျးနညျးနဲ့ သံပုယိုရညျ (သို့) သံပုရာရညျ ရောပွီး ပဈြပဈြလေးဖြျောလိုကျပါ။ ပွီးရငျ သှားတိုကျတံပျေါတငျပွီး သှားတိုကျပေးပါ။ ၁ ပတျကို တဈကွိမျလောကပဲ အသုံးပွုပါ။ သှားတိုကျဆေး၊ ဆား၊ မှုနျ့ဖုတျဆိုဒါနဲ့ သံပုယိုရညျ (သို့) သံပုရာရညျ ဒီနညျးလမျးကို … Read more
Categories ကျန်းမာရေးသုတ, အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး Tags သှား
နာကျင်ကိုက်ခဲ ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ အတွက်
ခရမ်းသီးကို စားပေးခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်တွင်း ပျက်ဆီးသွားတဲ့ ဆဲလ်တွေကို အသစ်ပြန်လည် ဖြစ်စေပါတယ်။ အမျှင် ဓာတ်များပါလို့ အစာအိမ်နဲအူလမ်းကြောင်းကိုသန့်စင်ကျန်းမာစေပါတယ်။အဆစ်အမြစ်များနာကျင်ခြင်းကိုသက်သာစေပါတယ်။ အဆစ်အမြစ်နာကျင်ကိုက်ခဲတာကို ပျောက်ကင်းစေ အတွင်းအပြင် ရောင်ခြင်း နာခြင်း ခြေဆစ်ဒူးနာခြင်းတို့ကိုခရမ်းသီးပြုတ်ရည်သက်သာစေပါတယ်.. အိုးတစ်လုံးထဲမှာရေထည့်ပြီးဆူအောင်တည် အနေတော်ခရမ်းသီးတစ်လုံးပါးပါးလှီး ဆူနေတဲ့ရေထဲကိုထည့်ပါပြီးရင်မီးပိတ်ပြီး ရေအေးအောင်ထားပါ တစ်နေ့ကို မနက် , နေ့လည် , ည , ၃ ခွက်သောက်ပါ လိမ်းရန်အတွက်– ခရမ်းသီးပြုတ်ရေထဲ သံလွင်ဆီ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး လိမ်းပါ။အဝတ်သန့်ပတ်ပြီး အိပ်ရာဝင် ရက် ၂၀ဆို သက်သာလာမည်။ my food myanmar Unicode ခရမျးသီးကို စားပေးခွငျးဖွငျ့ ဦးနှောကျတှငျး ပကျြဆီးသှားတဲ့ ဆဲလျတှကေို အသဈပွနျလညျ ဖွဈစပေါတယျ။ အမြှငျ ဓာတျမြားပါလို့ အစာအိမျနဲအူလမျးကွောငျးကိုသနျ့စငျကနျြးမာစပေါတယျ။အဆဈအမွဈမြားနာကငျြခွငျးကိုသကျသာစပေါတယျ။ အဆဈအမွဈနာကငျြကိုကျခဲတာကို ပြောကျကငျးစေ အတှငျးအပွငျ … Read more
အရက် ဖြတ်ချင်သူများ အတွက် သံပုရာမြစ်
အရက်ဖြတ်ဆေး၊အရက်ပြတ်ဆေး အရက်ကိုလည်းဖြတ်ချင်တယ်မသောက်ဘဲလည်းမနေနိုင်ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်းမထိန်းနိုင် မမြင်ရရင်မသောက်ပဲနေနိုင်တယ် မြင်မိပြန်တော့သောက်ချင်မိပြန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေသူများနှင့်အရက်မသောက်စေချင်တော့လို့ဖြတ်ပေးချင်သူများအတွက်နည်းလမ်းကောင်းလေးပါ ဆေးနည်း သံပုရာပင်ရဲ့အမြစ်ကိုတူးယူ (အစို /အခြောက်မဟုတ်)ဓားလေးနဲ့စင်း အရည်ရအောင်ငရုပ်ဆုံသန့်သန့်လေးနဲ့ထည့်ထောင်းပါ ရလာတဲ့အရည်ကိုဆားအနည်းငယ်ထည့်သောက်ပေးပါ/တိုက်ပေးလိုက်ပါ ။တစ်နေ့မှတစ်ကြိမ်ပဲတိုက်ပေးပါ။ (၂)ကြိမ်(၃)ကြိမ်(၂)ရက်အလွန်ဆုံးသုံးရက်ပဲတိုက်ပေးလိုက်ပါ လုံးဝအရက်ပြန်မသောက်ချင်တော့ပါ။ အရက်ကျေးကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။မိသားစုများစိတ်ချမ်းသာနိုင်ကြပါစေ La WoneEain Unicode အရကျဖွတျဆေး၊အရကျပွတျဆေး အရကျကိုလညျးဖွတျခငျြတယျမသောကျဘဲလညျးမနနေိုငျကိုယျ့စိတျကိုလညျးမထိနျးနိုငျ မမွငျရရငျမသောကျပဲနနေိုငျတယျ မွငျမိပွနျတော့သောကျခငျြမိပွနျတယျအဲ့လိုဖွဈနသေူမြားနှငျ့အရကျမသောကျစခေငျြတော့လို့ဖွတျပေးခငျြသူမြားအတှကျနညျးလမျးကောငျးလေးပါ ဆေးနညျး သံပုရာပငျရဲ့အမွဈကိုတူးယူ (အစို /အခွောကျမဟုတျ)ဓားလေးနဲ့စငျး အရညျရအောငျငရုပျဆုံသနျ့သနျ့လေးနဲ့ထညျ့ထောငျးပါ ရလာတဲ့အရညျကိုဆားအနညျးငယျထညျ့သောကျပေးပါ/တိုကျပေးလိုကျပါ ။တဈနမှေ့တဈကွိမျပဲတိုကျပေးပါ။ (၂)ကွိမျ(၃)ကွိမျ(၂)ရကျအလှနျဆုံးသုံးရကျပဲတိုကျပေးလိုကျပါ လုံးဝအရကျပွနျမသောကျခငျြတော့ပါ။ အရကျကြေးကြှနျဘဝမှလှတျမွောကျနိုငျကွပါစေ။မိသားစုမြားစိတျခမျြးသာနိုငျကွပါစေ La WoneEain
အသက်ရှူ မ၀သလိုဖြစ်ခြင်းအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေး
November 23, 2020 by Latest Myanmar News
ကြက်သွန်ဖြူ+နွားနို့ဟာ စသောက်ချိန်မှာ တမျိုး ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ ဒါကို သောက်ခြင်း အားဖြင့် (1) ပန်းနာရင်ကြပ်။ (2) အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲ ခြင်း။ (3) အဆုတ်ရောင် ရောဂါ။ (4) တီဘီ ရောဂါ။ (5) နှလုံး နှင့်ပါတ်သက်သောရောဂါ။ (6) အိပ်မပျော် တဲ့ ရောဂါနှင့်အခြားသော ရောဂါ များ ကို ကုသရာ မှာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း – (1) အခွံ နွှာထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ၁၀ စိတ်။ (2) နွားနို့ 500ml။ (3) သကြား လ္ဘက်ရည်ဇွန်း 2~3 ဇွန်း။ (4) ရေ 250 ml။ပြုလုပ်ပုံ – ရေ … Read more
← Previous Page1 … Page161 Page162 Page163 … Page324 Next →